Warar kala duwan oo ka soo baxaya duqeyn culus oo ka dhacday gobolka Sh/dhexe | Allbanaadir.com
Home HIRSHABELLE Warar kala duwan oo ka soo baxaya duqeyn culus oo ka dhacday...
Warar kala duwan oo ka soo baxaya duqeyn culus oo ka dhacday gobolka Sh/dhexe
Faahfaahino ayaa ka soo axaya duqeymo xalay saqdii dhexe ka dhacay degaan ka tirsan gobolka Sh/dhexe oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al Shabaab.
Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegaya in duqeyntan lala beegsaday meel ku dhaw degaanka Basra ee duleedka degmada Balcad oo ay isku urursanayeen ciidamo ka tirsan Al-Shabaab.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaabka ay u dhacday duqeyntaas, kuwaasoo qaarkood sheegayaan in loo adeegsaday hoobiyeyaal iyo qoriga BM-ka loo yaqaan, halka warar kalena ay tilmaamayaan in duqeynta ay fuliyeen dayaarado dagaal.
Xoogaga Al-Shabaab ka tirsan ee la duqeeyay ayaa la sheegay iney yihiin kuwii shalay degaanka ilbaq ka afduubtay gaari qaad siday iyo darawalkii la socday oo ka baxay Muqdisho, kuna sii jeeday magaalada Jowhar.
Lama oga khasaaraha nafeed ee duqeyntaasi loogu geystay Al-shabaab, mana jiraan war ay arintan ku saabsan oo ka soo baxay ciidamada dowlada iyo kuwa shisheeye ee taageeraya.
Previous articleGobol ka mid ah dalka Canada oo laga mamnuucay Xijaabka Islaamka
Next articleXiisad ka taagan garoonka Aadan cadde & Shaqaale careysan oo ku dhaqaaaqay shaqo joojin